🥇 ▷ Touchez to Unlock: shayga wax ka beddelaya 'Swipe to furo' hal taabasho ✅
Touchez to Unlock: shayga wax ka beddelaya ‘Swipe to furo’ hal taabasho
Touchez to Unlock wuxuu si fudud u furayaa furitaanka shaashadda qufulka
Iyada oo loo marayo Cydia waxaan ka heli karnaa tweak cusub ama wax ka badal kaas oo mas’uul ka ah gebi ahaanba beddelka caanka ah ‘Swipe to fur’ ee laga heli karo nidaamka hawlgalka mobilada ee Apple si loo helo fikrad cusub oo wax ku ool ah, waxay ku saabsan tahay “Taabasho in la furo” ama sida isla tweak waxaa loo yaqaanaa «Touchez inuu furo«. Waxbadan ka baro waxbadan oo kusaabsan isbadalkan cusub ee hoose.
Iyada oo leh “Touchez in la furo” kaliya waa inaad Touchez si aad u hesho hawlaha iPhone
Markaan ku dhaqaaqno tigidhada qalabkan ‘iOS’ ah, lagama maarmaan ma ahan in la sameeyo “Slide si loo furo” ee ay soo saartay Apple ee nidaamka hawlgalkaaga moobiilka, taas oo noo oggolaaneysa inaan ka helno dhammaan howlaha taleefanka shaashadda qufulka. Isbadalkan cusub waxaan si fudud u riixaynaa badhan si aan uhesho shaashadda guriga ee iPhone-ka.
Iyada oo la adeegsanayo Nidaamyada macruufka ‘iOS’ waxaan ka heli karnaa xulashooyinka qaabeynta tweak, kuwaas oo ka mid ah waxaan haynaa dhowr siyaabo oo aan u habayn karno, waxaan ka heli karnaa astaamo ay ka mid yihiin beddelidda midabka qoraalka «Touchez si aad u furto«, cabbirka badhanka iyo xitaa dhaqdhaqaaqa ikhtiyaarka «Touchez Meel kasto«, kaas oo noo oggolaan doona inaan taabto meel kasta oo shaashadda ah si aan taleefanka u furno.
Tani waa sida Touchez looga Furayo Shaqooyinka (Fiidiyowga)
Kadib waxaan kuu tageynaa muuqaal fiidiyow ah oo aan ku arki karno tweak-kaan iPhone, oo leh iOS 7 iyo Jailbreak, si ficil ah.
Tan waxaa dheer, waxaan sidoo kale xakameyn karnaa furfurnaanta aan rabno badhanka inuu lahaado ama xitaa waxaan ku meeleyn karnaa sawir asal ah.
Haddii aad xiiseyneyso inaad ku isticmaasho TaptoUnlock7 qalabkaaga iOS, waxaa laga helaa Cydia gudaha bakhaarka BigBoss $ 0.99.